Ikhuza ibuya ifestivali yemidlalo yeshashalazi | News24
Ikhuza ibuya ifestivali yemidlalo yeshashalazi
UBUYE ngezinkani Umphithi theatre festival odume ngokudlisa ngethalente labalingisi beshashalazi baseMgungundlovu namaphethelo.
Ngonyaka owedlule le-festivali esungulwe iqembu laKwaPata Umphithi theatre group bekungeyokuqala ngqa kanti ibihanjelwe umlingisi wakuleli oyintandokazi womdlalo iSibaya uBheki Mkhwane.
Kulonyaka le-festivali izobanjwa mhlaka 20 no 21 ku Agasti eSukuma Comprehensive School eMbali. Ngokusho komunye wabasunguli bale-festivali uGcina Mdluli nakulonyaka bathembisa into yamehlo kanti kumanje uthe bamatasatasa bahlunga amaqembu azoba yingxenye yayo.
“Liningi kakhulu ithalente lapha eMgungundlovu, ngale-festivali sifuna ukuvundulula abalingisi beshashalazi sikhombise nabanye ukuthi bangathatha lomkhakha bawenze umsebenzi. Uma ubheka emadolobheni afana neTheku neGoli imidlalo yeshashalazi isezingeni eliphezulu futhi banezakhiwo ezithuthukisa lomsebenzi.
“Kwamanye amadolobha imidlalo yeshashalazi ithakaselwa kakhulu, sifuna nalapha eMgungundlovu ibe kulelozinga. Abantu bazi ukuthi kunezindawo abangazivakashela kulelidolobha uma befuna ukubuka imidlalo yeshashalazi.”
UMdluli uthe lefestivali inikeza abaqondisi bemidlalo abasafufusa ithuba lokuthuthukisa imisebenzi yabo. “Kulonyaka amajaji azobe ezobheka imisebenzi yamaciko aphinde awahlomise ngolwazi awalekelele nangomkhakha angene kuwona. Sinamaqembu aqhamuka eBelgium nase Germany. Umgungundlovu unamaciko amaningi anethalente ngakho le-festivali iyinkundla yokuthi amaciko azithuthukise,” kusho yena. Uqhube wathi izinga lale-festivali liyakhula kakhulu njengoba kulonyaka amaqembu ezohlomula ngomklomelo wemali kulonyaka.
Iqembu eliyodla umhlanganiso lizohlomula ngo R10 000 elizolala indawo yesibili lona lizothola uR5000 bese kuthi elizolala indawo yesithathu lithole uR3000. Kuzophinde kuqokwe umlingisi wesilisa nowesifazane owenze kahle abayohlomula nge Lucky Mavundla award kanye no R1000 ngaphezulu umuntu emunye.
UMdluli uthe baphezu kwezinhlelo zokuthi labo abawinile kulefestivali babe yingxenye yamafestivali amakhulu akuleli afana ne-Grahamstown festival noma Isigcwawu festival.
Uthe bamema amaciko akuzona zonke izifunda zaseMgungundlovu ukuba abe yingxenye yokuhlungela lefestivali.
“Ukuhlunga sizoqeda mhlaka 31 kuJulayi kanti ngoba siyazi ukuthi abantu abasafufusa laba esikhuluma ngabo ithina esizobahambela emahholo emphakathi ezindaweni abahlala kuzo.”
Ukuba yingxenye yale-festivali kumahhala kanti amalunga omphakathi azobe ezobuka ayacelwa ukuba anikele noma ingamalini.
Ngeminye imininingwane ngale festivali ungaxhumana noGcina Mdluli ku 072 545 2942 okanye uthumele i-email ku umphithiartscompany@gmail.com noma uvakashele iwebsite yabo www.umphithiartscompany.co.za